एमसीसी कसरी भयो नेपालबाट पास गर्न चुनौती ! | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
एमसीसी कसरी भयो नेपालबाट पास गर्न चुनौती !
२०७८ भाद्र २९, मंगलवार ११:५९:००
अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी देखिएको छ । ५० करोड डलरको यो अनुदान रकम विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानीका लागि सम्झौता भएको हो । तर, एमसीसीका कतिपय बुँदाप्रति सत्तारुढ राजनीतिक दलबीच मतभेद छ । एमसीसी राष्ट्रहित विपरितको सम्झौता भन्दै सडकमा विरोधसमेत भएको छ, भइरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेस एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्ने पक्षमा छ । नेकपा एमाले पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र एमसीसीबारे फरक दृष्टिकोण छ । एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा माओवादी र नेकपा एस छन् । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकतत्वमा तत्कालीन नेकपाले गठन गरेको कमिटीको सुझाव अनुसार संशोधनसहित एमसीसी पारित गर्न सकिने बताइसकेका छन् ।
एमसीसीबारे काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको धारणा बदलिएको छैन । सुरुदेखि नै काँग्रेस एमसीसीको पक्षमा थियो भने माओवादी र नेकपा एस सशोधनसहित पारित गर्ने पक्षमै छन् । तर, नेकपा एमालेभित्र एमसीसीको विरोध हुन थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे विगतभन्दा फरक धारणा विकास गरेका छन् । विगतमा ओली स्वयं एमसीसी पारित गरेर अगाडि बढाउन चाहन्थे । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सदनमा अगाडि बढाउन अवरोध गरेको आरोप समेत लगाएका थिए । अहिले सत्ताबाहिर पुगेपछि ओली ‘यु टर्न’ भएका छन् ।
नेपालका कतिपय नेताहरु सत्तामा रहँदा र बाहिरिएपछि विदेशीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्ने गर्छन् । विदेश नीतिमा एकरुपता हुनुपर्नेमा दल र दलका नेतापिच्छे फरक धारणा हुने गरेको छ । कतिपयको धारणा सत्तामा हुँदा एउटा, सत्ता बाहिर हुँदा अर्को हुने गरेको छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओलीले त्यही प्रवृत्ति देखाएका छन् । उनले आफूलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले नभई विदेशीले सत्ताबाट हटाएको आरोप समेत लगाएका छन् । प्रचण्ड र नेपालमाथि विदेशीको निर्देशन मात्र पालना गरेको आरोप लगाएका छन् ।
ओलीले एउटै दलमा लामो समय काम गरेका नेताहरुमाथि विदेशीसँग जोडेर गम्भीर आक्षेप लगाएका छन् । जुन एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको नेताका लागि सुहाउँदो थिएन । हुन त ओलीका अभिव्यक्तिमा विचारभन्दा गाली बढी हुने गरेको छ । एमसीसीसँग जोडेर उनले नेताहरुलाई आक्षेप लगाउन समेत थालेका छन् ।
विदेशी सहयोगसम्बन्धी एमसीसीबारे विवाद गर्ने र एमसीसीलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा यसको वास्तविकतालाई गहिरोसँग केलाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेताहरु स्वयं जनता भड्काउन उद्यत देखिन्छन् । पूर्वाधार विकासमा सकेसम्म विदेशी सहयोगभन्दा आत्मनिर्भरताको बाटो उत्तम हुन्छ । विदेशी सहयोग लिनैपर्दा राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी हुन्छ ।
एमसीसी सम्झौतामा विवादका विषय छन् भने संशोधनका लागि जिम्मेवार दल र नेताहरुले सहमति बनाउन जरुरी छ । एमसीसीमा नेपालको पनि लगानी रहने तर लेखापरीक्षण भने अमेरिकाले मात्रै एकलौटी गर्ने बुँदामाथि प्रश्न उठेको छ । एमसीसी सम्झौताको दफ ७.१ मा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने सर्तबारे उल्लेख छ ।
जसमा संविधान र एमसीसी बाझिएमा एमसीसीका प्रावधान लागू हुने भनेर सरकारले स्वीकार गरेको छ । यो प्रावधानमाथि प्रश्न उठेको हो । अर्को बुँदामा एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा जे गरे पनि मुद्दा नलाग्ने सहमति गरिएको छ । एमसीसी परियोजनाबाट नेपालमा कसैलाई हानी भएमा एमसीसी वा अमेरिकाले जिम्मेवारी नलिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
एमसीसीका कतिपय बुँदामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् । तिनको संशोधन जरुरी हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक सहमति गरेर जानुको विकल्प छैन । सहयोग भन्दैमा आँखा चिम्लेर सम्झौता गर्ने र पछि पछुताउने कुरा नेपालका नेताहरुमा विकास भएको छ । कतिपय सहयोग सम्झौताले समस्या समेत खडा गरेका छन् ।